Innaga iyo Itoobiya waxaanu nahay laba dal oo deris ah. Loolan siyaasadeed oo dheer ina dhexmaray. Waa dal wayn oo itaal, dhaqaale iyo xiriir dawli ah intaba innaga badan. Waxay kaloo inaga sitaan aqoonta ay inoo leeyihiin. Ma badna inta aan Itoobiya ka naqaan. Inta badan xogteenu waxay ku dhisan tahay waa la yiri iyo cilmi dhagood.
W/Q : Cabdiraxman Cabdishakuur
Dowlada Soomaaliya oo qoraal kasoo saartey heshiiska Kenya [Akhri]
War Saxaafaded 06.03.2019. 15:35
Kadib markii Madaxweyne Farmaajo iyo RW Itoobiya booqasho ku tageen Kenya ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in xal laga gaarey khilaafka labada dal ee Soomaliya iyo Itoobiya.